अर्थ – Tufan Media News
फेरि बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य : पेट्रोलको १९९, डिजेल-मट्टीतेल १९२
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले आइतबार राति इन्धनको मूल्यमा भारी वृद्धि गरेको छ । आइतबार बसेको निगमको सञ्चालक समिति बैठकले डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर २७ र पेट्रोलमा प्रतिलिटर २१ रुपैयाँ मूल्य बढाएको हो । निगमले बढाएको मूल्य आइतबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले सार्वजनिक गर्नुभएको विज्ञप्...
ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, कति छ आजको प्रतितोला ?
काठमाडौं :सुनको मूल्य आज नेपाली बजारमा प्रतितोला ९७ हजार पाँच सय रुपैयाँ पुगेको छ । सोमबार प्रतितोला ९८ हजार एक सय रुपैयाँ रहेको सुन मंगलबार ६ सय रुपैयाँले घटेको हो । तेजाबी सुनको मूल्य भने प्रतितोला ९७ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै, चाँदीको मूल्य भने बढेको छ । सोमबार प्रतितोला एक हजार एक सय ६ रहेको चाँदीको...
काठमाडौं । तपाईंले एक वर्षमा के कति कर तिर्नुपर्ला ? हिसाब गर्नुभएको छ । यदि छैन भने तपाईंलाई हामीले जानकारी दिने प्रयास गरेका छौँ । सरकारले यही जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्याे । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्दा करका विभिन्न दरको समेत हेरफेर गरे । सोही आध...
सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य घटाएको छ। बिहीबार राति १२ बजेबाट लागू हुने गरी सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको भाउ लिटरमा १० रूपैयाँ घटाएको हो। नेपाल आयल निगमद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार नयाँ मूल्यसँगै अब काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोल १७० रूपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेल १५३ रूपैयाँ लिटर पर्नेछ।एलपी ग्यासको भन...
सरकारले डिजेल र पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढाएको छ। नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिको बैठकले आज मध्यरातदेखि लागू हुनेगरी मूल्य वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो। चुनावलगत्तै सरकारले एकैपटक उच्च मूल्यवृद्धि गरेको हो। योसँगै पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १७० र डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १५४ रुपैयाँ पुगेको छ । खाना पकाउने ए...
आज पनि घट्यो सुनको मूल्य कतिमा हुँदै छ ? आजको कारोबार हेर्नुहोस्
काठमाडौ । नेपाली बजारमा साताको दोस्रो दिन सुनको मूल्य घटेको छ । आइतबार ९९ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य तोलामा ८ सय रुपैयाँले घटेर तोलामा ९८ हजार २ सय रुपैयाँमा किनबेच भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका जनाइएको छ । त्यस्तैगरी आज तेजावी सुनको मूल्य प्रतितोला ९७ हजार ७ सय रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै आज च...
काठमाडौ । सुनचाँदी बजारमा साताको पहिलो कारोबार दिन आज छापावाल सुनको मूल्य प्रति तोला रु एक लाख ५०० तोकिएको छ । पहेँलो धातु अघिल्लो दिन प्रतितोला रु एक लाख ९०० मा कारोबार भएकामा आज प्रतितोला रु ४०० ले ओरालो लागेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला रु एक ला...
नेपालमा आजदेखि पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री बन्द
काठमाडौँ : राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिले शुक्रबारदेखि अ’त्यावश्यक पेट्रोलियम पदार्थको लोड/अनलोड ठप्प पारेको छ । इन्धन ढुवानी भाडालाई डिजेलको मूल्य अनुपातमा घटबढ हुनेगरी स्वचालित प्रणाली कायम गर्नुपर्ने, पेट्रोलियम व्यवसायीले पाइरहेको कमिसन वृद्धि गर्नुपर्ने लगायत माग राख्दै करिब दुई सातादेखि आन्...
काठमाडौ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई १० बुादे प्रस्ताव पठाउादै निगमले आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा थप्न सुझाव दिएको हो । बिदाका दिन सवारीसाधनको प्रयोग कम हुने भएकाले तेलको खपत पनि कम हुने निगमको भनाई छ । अन्तराष्ट्रिय वजारमा बढ्दै गएको इन्धनको मुल्यले नेपालमा पनि असर गरेको छ । नेपाल आयल निगमलाई माग धान्न समस...
काठमाडौं । सुनचाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला रु २०० ले घढेर रु ९२ हजार ५०० मा आएको छ । पहेँलो धातु अधिल्लो दिन प्रतितोला रु ९२ हजार ७०० मा कारोबार भएको थियो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला रु ९२ हजार कायम भएको छ । जसको मूल्य बिहीबार प्...